भ्यालेन्टाइन डे को दिन पर्यटकले भरिभराउ सौराहा - नेपालबहस
भ्यालेन्टाइन डे को दिन पर्यटकले भरिभराउ सौराहा
| १२:११:२६ मा प्रकाशित
२ फागुन,चितवन । पर्यटकीय नगरी सौराहा प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) मा आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ भएको छ । शुक्रबार र शनिबारको बिदा र यसपछिको प्रणय दिवसले आन्तरिक पर्यटकको आगमन उत्साहजनक भएको हो ।
रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोशिएसन ९रेवान० सौराहाले यही अवसरमा खाद्य महोत्सवको समेत आयोजना गरेको छ । रेवानका निवर्तमान अध्यक्ष गोकर्ण गिरीका अनुसार सौराहाको हात्तीचोकदेखि गैँडाचोकसम्मको ६०० मिटर सडक किनारमा विभिन्न परिकारका कक्ष राखिएका छन् । दुईदिने महोत्सव आजसम्म जारी रहनेछ । महोत्सवका अवसरमा विभिन्न जातिका सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खानाका परिकार राखिएका छन् ।
यस्तै ती जातिले सांस्कृतिक प्रदर्शनीसमेत प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनका अनुसार आज ब्राह्मणसहित विभिन्न जातिका नौ वटा जातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । थारु, तामाङ, कुमाल, मगर, नेवारलगायतका जातिले आआफ्ना संस्कृति झल्कने प्रस्तुति देखाउने छन् । अध्यक्ष गिरीले भने, “अन्य व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् ।” सबैले यस्ता कार्यक्रम हरेक शुक्रबार गर्न सुझाएको नले बताए । स्वीकृति पाएमा रेवानले हरेक हप्ता कार्यक्रम गर्ने उनको भनाइ छ ।
क्षेत्रीय होटल सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन घिमिरेका अनुसार शनिबार सौराहाका सबै होटल भरिएका थिए । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आन्तरिक पर्यटक पारिवारिक र जोडी घुम्न आएका छन् । समूहगतरुपमा घुम्न आउनेको सङ्ख्या पनि राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनपछि शनिबार सबैभन्दा बढी पर्यटक सौराहा आएका हुन् । पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै अन्य पर्यटकीय गतिविधि पनि चलायमान भएको छ । हात्ती सफारी, डुङ्गा सयर, जीप सफारी, थारु सांस्कृतिक प्रदर्शनीसँगै अन्य व्यवसायमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । राति अबेरसम्म सौराहाका राप्ती नदी किनारका रेष्टुरेष्टमा पर्यटक रमाउने गरेका छन् ।
आन्तरिक पर्यटकले भरिदै पोखरा ५ दिन पहिले
सरकारले बुटिक र डिलक्सलाई तारे ‘स्टार’ होटलको मान्यता दिने १ हप्ता पहिले
वातावरण संरक्षणमा अग्ला रूखको विशेष महत्व हुन्छ : प्रम ओली २ मिनेट पहिले
२ वर्षमा ४७ अर्बको राजश्व छली, एक हजारविरुद्ध मुद्दा ६ मिनेट पहिले
घरघरमा पानी पु¥याउने अभियानमा स्थानीय तह १० मिनेट पहिले
रेशमलाई जेलमा राखिरहने तागत अब कसैसँग छैन् : महतो १४ मिनेट पहिले
विप्लवले प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउँदै १८ मिनेट पहिले
निर्माणाधिन व्यपारिक बजार केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेन २३ मिनेट पहिले
विराट इन्स्टाग्राममा धेरै फलो गरिने खेलाडीको चौथो स्थानमा २५ मिनेट पहिले
प्रवीण बाँस्तोला हत्या प्रकरणमा थप एक प्रतिवादी पक्राउ २८ मिनेट पहिले
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी जवाफसहित हाजिर हुन अदालतको आदेश ३१ मिनेट पहिले
दूधमा अनुदानः उत्पादन बढाउँदै किसान ३७ मिनेट पहिले
कटाक्षे विद्युत्गृहको काम असार मसान्तसम्ममा सक्ने ३९ मिनेट पहिले
असिनापानी र रोगका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी ४३ मिनेट पहिले
विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन ४५ मिनेट पहिले
नागरिक लगानी कोषको साढे ३ लाख कित्ता शेयरमा बुधवारदेखि आवेदन दिन सकिने ४५ मिनेट पहिले
निकुञ्जका गैँडा उचित बासस्थान खोज्दै पश्चिमतर्फ २२ घण्टा पहिले
नेपाली किसानले नदिएपछि भारतीय उखु आयात ४७ मिनेट पहिले
सिनो हाइड्रो र मजदूरबीच विवाद समाधान, अवरुद्ध काम शुरु २२ घण्टा पहिले
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो १७ घण्टा पहिले
सर्लाहीमा १५ करोडको गोलभेँडा उत्पादन ५४ मिनेट पहिले
सामरी स्वास्थ्य चौकीलाई ज्योती विकास बैंकको सहयोग ७ दिन पहिले
ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज नबस्ने ५ दिन पहिले
इक्वेडरमा जेलमा भएको दंगामा परी मृत्यककाे संख्या ७९ पुग्यो ५ दिन पहिले
ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने प्रष्ट : मन्त्री श्रेष्ठ १८ घण्टा पहिले
सिजनको सुन्तला बेसिजनका लागि भण्डारण गर्दै किसान ४ हप्ता पहिले
शनिबार र आइतबार विद्युत आपूर्ति नहुने ३ हप्ता पहिले
सडक छेउ र नदी किनारमा फालिएको फोहोरले प्रदूषण २ हप्ता पहिले
मञ्जुश्री फाइनान्सको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप, कहिलेसम्म दिन सकिने ? ४ हप्ता पहिले
मध्यविन्दुले बेरोजगार युवालाई तीन कराेड सहुलियत ऋण दिने ४ हप्ता पहिले
भारतबाट दुई साताभित्र २० लाख खोप आइपुग्‍ने २ हप्ता पहिले
अब बाग्मतीमा कोरोना संक्रमितको निः शुल्क उपचार ४ महिना पहिले
हरेक दिन मौसमको सही सूचना दिन मन्त्री पुनको निर्देशन ७ महिना पहिले
आज काठमाडौंमा ७ घण्टा बत्ती जाने ! १ वर्ष पहिले